ကလေးဝမျးစိမျးလငျြစိုးရိမျ၇ပါသလား? - OnDoctor
By Kaung Htet Naing	 On Dec 18, 2018 Last updated Mar 9, 2019
နို့စို့က​လေးများသည်​ တခါတ၇ံ ​အောက်​ပါအ​ကြောင်းအ၇င်းများ​ကြောင့်​ဝမ်းအစိမ်းေ၇ာင်​သွားတက်​ကြပါတယ်​။
၁)မိခင်​နို့စို့​နေ​​သောက​လေးဖြစ်​လျင်​ မိခင်​က အစိမ်း​ရောင်​ ဟင်းသီးဟင်း၇ွက်​များ(ဥပမာ-ဟင်းနုနယ်​)စားလျင်​ က​လေးဝမ်းစိမ်း သွားတက်​ပါတယ်​။
၂) မိခင်​နို့တွင်​ပါဝင်​​နေ​သော မိခင်​စားသုံးလိုက်​​သော အစားအစာ (ဥပမာ-နွားနို့နှင့်​ နို့ထွက်​ပစ္စည်းများ) နှင့်​ မတည့်​​သော​ကြောင့်​လည်း က​လေးဝမ်းစိမ်း သွားတက်​ပါတယ်​။ မိခင်​နို့နှင့်​ မတည့်​​သော​ကြောင့်​ မဟုတ်​ပါ။ ထိုသို့ဖြစ်​လျင်​ မိခင်​အ​နေဖြင့်​ နွားနို့နှင့်​ နို့ထွက်​ပစ္စည်းများ ကို မစားပဲ ​ရှောင်​ကျဉ်​ရပါမည်​။
၃)ဖြည့်စွက်စာေ​ကျွး​သောအ၇ွယ်​တွင်​ က​လေးကို အစိမ်းေ၇ာင်​ရှိတဲ့ အစားအစာကို ​​ကျွေးထား၇င်​လည်း က​လေးဝမ်းစိမ်းသွားတက်​ပါတယ်​။
၄) ဝမ်း​ပျက်​ ဝမ်း​လျောဖြစ်​​နေချိန်​တွင်​ အူများ၏ လှုပ်​ရှားမှုမှာ အလွန်​မြန်​သဖြင့်​ သဲ​ခြေ၇ည်​နှင့်​ အူတွင်း ရှိ လူ့အကျိုးပြု ပဋိဇီဝ ပိုးများ ​တွေ့ဆုံဓာတ်​ပြုချိန်​ နည်းသွား​သော​ကြောင့်​ ဝမ်းပျပ်​ ဝမ်း​လျော ​နေ၇င်​လည်းဝမ်းအစိမ်းေ၇ာင်​ သွားတက်​ပါတယ်​။
မှေးကငျးစလေးတှရေဲ့ ခကျြကွိုးကို ပိုးမဝငျအောငျ ဘယျလိုထားမလဲ
၅)​ ​နို့တိုက်​ရာတွင်​ ​ရှေ့နို့ရည်​ (fore milk) နှင့်​ ​နောက်​နို့ရည် (hind milk) ​အချိုးအစားမမျှမှု ကလည်း က​လေးငယ်​​တွေကို ဝမ်းအစိမ်း​ရောင်​ သွား​စေပါတယ်​။
ဝမ်းအစိမ်း​ရောင်​သွား​သောက​လေးတွင်​ ​အောက်​ပါ လက္ခဏာ များမရှိလျင်​ စိတ်​ပူရန်​မလိုပါ။
က) ဝမ်းအရည်​များ မကြာမကြာသွားခြင်း
ခ) ​ဝမ်းသွား​သော​ကြောငိ့ေ၇ဓာတ်​ဆုံး၇ှုံး​သော လက္ခဏာ များရှိခြင်း (မျက်​တွင့်​ချိုင့်​၊ လျာ​ခြောက်​၊ အီ၊ မှိုန်း)
ဃ) ဝမ်းထဲတွင်​ ​သွေးပါခြင်း
အထက်​ပါ လက္ခဏာ များရှိလျင်​ နီးစပ်​၇ာ ​ဆေး၇ုံ ​ဆေးခန်းမှာပြ​ပေးပါ။
နို့စို့ကလေးမြားသညျ တခါတရံ အောကျပါအကွောငျးအ၇ငျးမြားကွောငျ့ဝမျးအစိမျးရောငျသှားတကျကွပါတယျ။
၁)မိခငျနို့စို့နသေောကလေးဖွဈလငျြ မိခငျက အစိမျးရောငျ ဟငျးသီးဟငျးရှကျမြား(ဥပမာ-ဟငျးနုနယျ)စားလငျြ ကလေးဝမျးစိမျး သှားတကျပါတယျ။
၂) မိခငျနို့တှငျပါဝငျနသေော မိခငျစားသုံးလိုကျသော အစားအစာ (ဥပမာ-နှားနို့နှငျ့ နို့ထှကျပစ်စညျးမြား) နှငျ့ မတညျ့သောကွောငျ့လညျး ကလေးဝမျးစိမျး သှားတကျပါတယျ။ မိခငျနို့နှငျ့ မတညျ့သောကွောငျ့ မဟုတျပါ။ ထိုသို့ဖွဈလငျြ မိခငျအနဖွေငျ့ နှားနို့နှငျ့ နို့ထှကျပစ်စညျးမြား ကို မစားပဲ ရှောငျကဉျြရပါမညျ။
၃)ဖွညျ့စှကျစာကြှေးသောအရှယျတှငျ ကလေးကို အစိမျးရောငျရှိတဲ့ အစားအစာကို ကြှေးထား၇ငျလညျး ကလေးဝမျးစိမျးသှားတကျပါတယျ။
၄) ဝမျးပကျြ ဝမျးလြောဖွဈနခြေိနျတှငျ အူမြား၏ လှုပျရှားမှုမှာ အလှနျမွနျသဖွငျ့ သဲခွေ၇ညျနှငျ့ အူတှငျး ရှိ လူ့အကြိုးပွု ပဋိဇီဝ ပိုးမြား တှဆေုံ့ဓာတျပွုခြိနျ နညျးသှားသောကွောငျ့ ဝမျးပပျြ ဝမျးလြော နေ၇ငျလညျးဝမျးအစိမျးရောငျ သှားတကျပါတယျ။
၅) နို့တိုကျရာတှငျ ရှနေို့ရညျ (fore milk) နှငျ့ နောကျနို့ရညျ (hind milk) အခြိုးအစားမမြှမှု ကလညျး ကလေးငယျတှကေို ဝမျးအစိမျးရောငျ သှားစပေါတယျ။
ဝမျးအစိမျးရောငျသှားသောကလေးတှငျ အောကျပါ လက်ခဏာ မြားမရှိလငျြ စိတျပူရနျမလိုပါ။
က) ဝမျးအရညျမြား မကွာမကွာသှားခွငျး
ခ) ဝမျးသှားသောကွောငိ့ ရဓောတျဆုံး၇ှုံးသော လက်ခဏာ မြားရှိခွငျး (မကျြတှငျ့ခြိုငျ့၊ လြာခွောကျ၊ အီ၊ မှိုနျး)
ဃ) ဝမျးထဲတှငျ သှေးပါခွငျး
အထကျပါ လက်ခဏာ မြားရှိလငျြ နီးစပျရာ ဆေးရုံ ဆေးခနျးမှာပွပေးပါ။
Baby's green poop is dangerous???Dr.Wutyi